Wargeysyada Wali Khaldamaya Qiimahooda | Martech Zone
Wargeysyadu Weli Waxay Qaldaan Qiimahooda
Arbacada, Oktoobar 14, 2009 Khamiista, Oktoobar 15, 2009 Douglas Karr
Muddo ayaa laga joogaa markii aan ku hadaaqay wargeysyada. Tan iyo markii aan ka imid warshadaha, weli waxay ku jirtaa dhiiggayga oo waxay u badan tahay inay had iyo jeer ahaan doonto. Wargeyskii ugu horreeyay ee aan abid ushaqeeyo waa la iibinayaa, wargeyskii maxalliga ahaa ee halkan ka soo baxayayna neefta ugu dambaysa ayuu hayaa. Sida qaar badan, ma akhriyo wargeyska mar dambe, illaa aan ka arko maqaal lagu taliyay oo loo maro Twitter ama mid ka mid ah quudinta aan shiido.
Bishan Majaladda NET wuxuu sheegayaa maqaal gaaban oo ku saabsan sida Google iyo micropayments ay isku dayi karaan badbaadi warshadaha wargeysyada. Waxay u muuqataa in Google ay u soo gudbisay talo Ururka Wargeysyada Mareykanka qorshe ku saabsan isticmaalka makarafoonnada. Si aan u run sheego, waxaan u maleynayaa inay tani tahay fikrad xun. Wargeys online Akhrisku si xun uma shaqeynayo - marka ma aaminsani in weydiisashada shilimaad ama labo ay tahay jawaabtu.
Wargeysyadu way indho la’yihiin qiimaha ay leeyihiin. Saxaafada xorta ahi waxay leedahay taariikh midab leh oo wadankan ah… ilaa 40% oo ah faa iidada faa iidada leh ee lagu cidhiidhinayo xayeysiiska geeskasta oo warqada ka mid ah Tag qol kasta oo wargeys ah dooduna waxay ku saabsan tahay dakhliga xayeysiinta iyo sida loo ilaaliyo daabacaadda khadadka geedaha dhintay si faa'iido looga helo. U tag joornaal kasto oo mogul ah waana wax walba oo ku saabsan sida loo jaro shaqaalaha, loo yareeyo kharashka daabacaadda, iyo - kaliya hadda - sida loo bilaabo helitaanka faa'iidooyinka internetka.
Ka madhan mid ka mid ah wada hadaladaas waa hibada cajiibka ah ee saxafiyiinta ee qodida qoto dheer iyo qorista maqaalada qoto dheer ee labadaba dadka ku madadaaliya kuna ilaaliya dimoqraadiyadayada. Dhowr sano ka hor, waxaan iri taa iibinta wararka ayaa dhintayRe Waxaan ka fakarayaa taas hada.
Waa tan taladayda joornaalada:
Ha u iibin akhbaartaada akhristayaasha. Taabadalkeed, ka iibi waxyaabahaaga boggaga, websaydhada, iyo ganacsiyada. U oggolow websaydhyada inay raadiyaan oo ay kala shaandheeyaan macluumaadka ay doonayaan inay soo bandhigaan, u oggolow iyaga inay ku dhex milmaan waxyaabaha ku jira boggooda, una oggolow inay u soo bandhigaan sida ay u doonayaan inay u soo bandhigaan… qiime ahaan.
Wargeysyada waxaa laga yaabaa inay noqdeen warbaahin xayeysiin wax ku ool ah sanadihii la soo dhaafay, laakiin waxay u baahan yihiin inay ku noqdaan xididdadooda… iyagoo si weyn uga hela qorayaasha ugu kartida badan warshadaha iyo gobollada ay ka soo jeedaan.
Nidaamka wadista sheeko ka socota fikrad si loo daabaco waa geedi socod aan caadi aheyn oo feker ahaanteyda la burburiyey sannadihii la soo dhaafay. Wargeysyadu waxay u baahan yihiin inay ku noqdaan xididdadooda haddii ay doonayaan inay noolaadaan. U oggolow saxafiyiinta in ay magac u sameystaan ​​naftooda, ku bixi waxqabadka ay ka kooban yihiin, u oggolow in ay noqdaan xiddig dhagaxa weyn. Taas macnaheedu maaha inay saxafiyiintu naftooda iibiyaan… waxay fahmeen muhiimadda sumcad nadiif ah.
Anigu shaqsiyan waan jeclaan lahaa inaan ku daro waxyaabaha ku jira Martech Zone oo ay ka kooban yihiin suxufiyiin xirfadlayaal ah maadooyinka iyo nuxurka labaduba waa ballaaran yihiin iyo qoto dheer… iyadoo hoos loo dhigayo kharashka.
Kuwa ka baxsan warshadaha ayaa durbaba arka fursadda. Saaxiibka Taulbee Jackson ayaa bilaabay Adeegyada Waxyaabaha Dijitaalka ah ee Raidious, iyo shirkadiisu waxay amaahanaysaa labadaba geedi socod iyo hibo warshadaha wargeysyada. Waxaa la yaab leh, ka wargeys maxalli ah ayaa maqaal sameeyey bilowga ah.
Ma hubo haddii ay jirto rajo ay wargeysyadu ka qabaan inay ka baxaan qalqalkan. Waxaan kaliya necbahay inaan arko hibada ururadan oo lumaya, in kastoo. Mawduuc weyn ayaa adag in la helo maanta… markaa baahida loo qabo raadinta casriga ah iyo dhexdhexaadinta bulshada. Wargeysyadu way yareyn karaan farqiga, waxay ilaashan karaan tayadooda, waxayna dib ugu laaban karaan faa'iidada.
Tags: fiidiyowga ganacsigacazoomiwakiilka taageerada macaamiishataariikhda infographicsturunturoonsync
Is-dhexgalka Suuqyada badan ee Is-dhexgalka ee ka socda Podium
Oktoobar 15, 2009 at 1:46 PM
Waxaan u maleynayaa inaad ku saxan tahay kan. Warshadaha wargeysku waxay ahaayeen (waana inay mar kale ahaadaan) ganacsiga wararka, maahan ganacsiga xayeysiinta. Maxaa diidaya inay ka faa'iideystaan ​​wixii ay horey u haysteen - weriyeyaasha - oo aad siisaan kaabayaal ay kaga ganacsadaan xirfaddooda. Qaabka ayaa la mid noqon doona wakiilada guryaha dhisme ee la jaan qaada hay'adaha gaarka ah.
Curt Franke, Xalka BitWise
Oktoobar 16, 2009 at 12:49 PM
Waxaad dhahdaa akhristayaasha wargeysyada akhriska ee internetka "si fiican uma shaqeynayaan." Sida laga soo xigtay Quantcast:
NYTimes.com -> Bogga 45-aad ee kaalinta
LATimes -> Bogga 110aad ee kaalinta
SFGate.com -> Bogga 133aad ee kaalinta
WashingtonPost.com -> Bogga 152aad ee kaalinta
NYDailyNews.com -> Bogga 160aad ee kaalinta
Aniga oo tixgelinaya in kuwani ay yihiin bogagga maxalliga ah (in kasta oo ay kuwani leeyihiin rafcaan qaran), oo tixgelinta darajooyinkani ay ka soo horjeedaan bogagga sida facebook, google iyo yahoo, waxaan dhihi lahaa aqriste waa wax fiican. Awooddooda ay lacag ku samayn karaan waa su'aal gebi ahaanba ka duwan.
Oktoobar 19, 2009 at 3:31 AM
@Halwebguy darajadi waa shaashad, fadlan fiiri isbedelada shirkadahaas. Waqtiyada qaarkood waxay kujiraan 2009 waxayna dhawaan bilaabeen inay dhisaan aqristaha internetka. Waqtiyada Latimes waa kuwo dhisan sanadkii la soo dhaafay. SFGate wuxuu ahaa mid fidsan 2 sano. Washingtonpost.com ayaa runtii hoos ugu dhacday sanadkii hore. NYDailyNews.com waa midka kaliya ee umuuqda inuu sifiican u korayo.
Maskaxda ku hay in ka bixitaanka dhowr goobood oo sarsare aysan u sheegeynin sheekada dhammaan warshadaha, in kastoo! Waxaan aqriyaa qaar ka mid ah barahan aad la hadasho… laakiin waan sameynayaa maxaa yeelay waan baajiyay waraaqda maxalliga ah waana joojiyay aqrinteeda maalin kasta. Guud ahaan, akhristayaasha wargeysyada internetka ayaa hoos u sii dhacaya.